बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: ड्राइभर अंकल आज किन रोए ? Children's Story of Kartikeya Ghimire
ड्राइभर अंकल आज किन रोए ? Children's Story of Kartikeya Ghimire
म आशा हुँ । म काठमाडौंकै एउटा विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्छु । आज म फेरि तपाईलाई आफ्नो कुरा सुनाउन आएकी छु । यो हाम्रो पहिलो भेट हो ।
आज मैले सुनाउने कुरा दुइ दिन अगाडिको हो । जुन दिन मेरो फाइनल जाँच सकिएको थियो ।
त्यो बिहानको समय थियो । मौसम एकदमै शान्त थियो । निकै रमाइलो पनि थियो । जाँच सकिएकोले मेरो मन हलुका फुरुङ भएको थियो । हो, त्यही विहान मैले मेरो बाबाको गाडी हाँक्ने ड्राइभर अंकललाई आँगनको एउटा कुनामा टोलाएर रुँदै बसेको देखें । म उनको नजिक गएँ । मलाई देख्नासाथ उनी मुसक्क हाँसे । तर उनको अनुहार अझै चिन्तित नै थियो । त्यसपछि मैले सोधें- अंकल तपाईं आज किन रुनुभएको नि ?
मेरो प्रश्न सुनेर उनी एकछिन भूइँतिर हेरेर केही बोलेनन् । मैले फेरि सोधें- भन्नुस् न अंकल तपाईंलाईं आज के भयो, किन नबोल्नुभएको ? मैले यति धेरै कर गरेपछि उनी केही बोल्न खोजेका थिए । तर अचानक बाबाको आवाज आयो- ल राम दाइ, छिटो गाडी निकाल आज हामी धुलिखेलतिर जानुपर्ने भयो ।
गाडी घुइयाँ गर्दै घरबाट बाहिर निस्कियो । म ड्राइभर अंकललाई हेरेको हेर्यै भएँ । बाबाले 'बाई छोरी' भन्दा पो म त झसंङ् भएँ ।
बाबा जानुभएपछि मलाई झन छटपटि भयो । ड्राइभर अंकल आज किन रोए भन्ने कुरा जान्न मलाईं निकै मन लाग्यो । म दौडदै छत मास्तिर कुँदें । छतमा मामु कर्लेस फोनमा गफ मार्न मस्त हुनुहुन्थ्यो । पन्द्र मिनेट कुर्दा पनि मामुको गफ सकिएन । म दिक्क लागेर फेरि तलतिर बैठक कोठामा आएर बसें । मेरो बैठक कोठाबाट अलि पर थुप्रै झुपडीहरु भएको बस्ती देखिन्थ्यो । मैले झ्याल छेउमै गएर एकछिन खोला छेउमा लस्करै बनाएका ती घरहरु हेरें । मलाई आज किनकिन ती घरहरु भएको ठाउँमा जान मन लाग्यो । म कसलाई साथी लिएर जाऊ भनेर एकछिन घोत्लिएँ । फेरि बाबाले भन्नु भएको सम्झें- 'मेरी छोरी ९ वर्षी भइसकी अब उसले सानो-सानो काम आफै गर्नुपर्छ नि ।'
मलाई बाबाको त्यो विचार ठीक लाग्यो । त्यसपछि मैले त्यो बस्तीमा एक्लै जाने विचार गरें । त्यहाँ जाने भन्नासाथ मैले सम्भिए अंकलको घर पनि त्यही त हो नि ! 'अब म त्यही अंकलको घर खोज्दै त्यहाँ जानें ।'- मैले मनमनै योजना बनाएँ । त्यसपछि म फटाफट घरबाट बाहिर निस्किएँ । मामुले देखेर घर र्फकनु पर्ला कि भन्ने मलाई ठूलो डर थियो । तर अहँ मलाई घरका कसैल देखेेनन् । म बिस्तारै दौडदै एउटा भत्केको पुल छेउमा पुगें । बागमतीको ढल ठस्स गन्हाएको थियो । म नाक थुन्दै फेरि दौडिएर झुप्रा घरहरु भएको त्यो गाउँ बस्तीभित्र छिरें । एउटा सानो गल्लीको बाटो हुँदै म हिडिरहेकी थिएँ । त्यो बाटो अलि-अलि अँध्यारो थियो । थुप्रै घरमा राता र सेता सुङ्गुरहरु पालेका थिए । मैले अलि पर एउटा कुनामा चारजना केटाहरुले गुच्चा खेलिरहेको देखें । उनीहरुले एकदमै फोहोर लुगा लगाएका थिए । म उनीहरुको छेउमा पुगेपछि उनीहरु गुच्चा त्यही छोडेर घरतिर भागे । म छक्क परें । त्यही छेउमा एउटी बूढी आमै सुतिरहेकी थिइन् । उनी सुतेको घरमाथि प्लास्टिकको छानो थियो । वरिपरि बार थिएन खुल्ला थियो । मैले उनलाई 'नमस्ते' भनें । ती आमै केही बोलिनन् । मैले फेरि अलि ठूलो स्वरमा रामहरि ड्राइभर बस्ने ठाउँ थाहा छ भनेर सोधें । उनले औलाले इसारा गरेर चार घर पर रहेको एउटा टिनले छाएको माटाको घरमा देखाइन् । म हतार-हतार त्यो घरतिर लम्किएँ ।
घर अगाडि पुगेपछि मैले ध्यान दिएर त्यो घरलाई हेरें । घर एकदमै पुरानो थियो । वरिपरि भित्ताहरु चर्केर भत्किन लागेका थिए । उत्तरतिरको भित्ता त खसिसकेको थियो । छाना पनि आधा मात्र थियो आधा भागमा प्लाष्टिक लगाइएको थियो । मैले ढकढक गरेर ढोका ढकढक्याए र अलिकति ठेलें । मैले ठेल्नासाथ ढोका गर्ल्याम्म ढल्यो । म डरले थुरथुर भएँ भित्रबाट एउटी आइमाइ मान्छे 'कोहो' भनेर कराउँदै आइन् । मलाई देखेपछि उनी चुप लागिन् । अचम्म मानेर मलाई हेर्न थालिन् । मैले मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोधें । उनले टाउको हल्लाएर चिन्छु भनिन् । उनले हतार-हतार एउटा गुन्द्री ल्याएर ओछ्याइन् । मलाई त्यही बस्न आग्रह गरिन् । म त्यहाँ बस्न सकिन । मलाई त ड्राइभर अंकल रुनुको रहस्य थाहा पाउँनु थियो । मैले कुरा खोतल्ने विचारले सोधें- यहाँ तपाईं र ड्राइभर अंकलमात्र बस्ने हो - मेरो बोली सुनेर भित्रबाट एउटी मेरी बहिनी उमेरकी फुच्ची म पनि यही बस्ने हो भन्दै आइन् । मैले ती बहिनीको अनुहारमा हेरें । उनको आँखाभरि आँसु सुकेको दाग थियो । मैले नानुलाई आफू छेउमा डाकेर माया गर्दै सोधें- नानु रोएकी हो, किन रोएकी मेरी प्यारी बहिनी ? मैले यति भन्नासाथ त्यो बच्चीले आँखाभरि आासु पार्दै मलाई हेरी । उसले मेरो हात च्याप्प समाती । ऊ घुक्क-घुक्क रुन थालि । उसले केही डराए जस्तै गरी 'दिदी आमा' भनेर चोर औलाले आमा भएतिर देखाइ । मैले ड्राइभरनी अन्टीलाई पुलुक्क हेरें । उनी पनि रोइरहेकी थिइन् । मैले फेरि बच्चीलाई हेर्न थालें । ऊ अहिले मेरो काखमा बसेकी थिई । ऊ मलाई केही भन्न खोज्दै थिई । घरि-घरि ऊ कहिले आमालाई र कहिले मलाई हर्ेर्ने गर्थी । उसको आँखाबाट आँसु भने बगिरहेको थियो । मैले बिस्तारै उसको टाउको मुसार्दै सोधें- भन, बहिनी तिमीलाई के भयो ?
मैले यति भन्नासाथ बच्चीले फेरि मेरो हात च्याप्प समाती । ऊ जुरुक्क उठेर मेरो पछाडि गएर उभिई । उसले हिक्क-हिक्क आवाज निकाल्दै भनी- दिदी, म पढ्न जानें । म ... ।
विचरी उसले यति मात्र भन्न भ्याएकी थिई । उसकी आमा दौडेर आइन् । उनले उसलाई समातेर दुइ झापड हानिन् । बच्ची दिदी, दिदी भन्दै पिटाइबाट बच्न मेरो खुट्टामा समातेर रुन थाली । त्यसपछि मलाई खपिनसक्नु भयो । म पनि बाबा भनेर रुन थालें । म रोएपछि ड्राइभरनी अन्टी डराइन् । उनी चुप लागिन् । मैले त्यो बच्चीलाई च्याप्प समातेर आफ्नो अंगालोमा कसें । ऊ अभ पनि घुक्क-घुक्क रुदै थिइ ।
हो, ठीक त्यतिबेला मैले आफ्नो खुत्रक्के सम्झें । त्यो भित्र भएको भरि पैसालाई पनि सम्झें । त्यसपछि मैले आँट गरेर भनें- बहिनी अब तिमी भोलि देखि दिदीसँगै स्कुल पढ्न जाने है ।
मेरो कुरा सुनेर बहिनी बिस्तारै मुसुक्क हाँसी । मैले उसका नरम-नरम राम्रा गालामा म्वाईं खाँदै भनें- आज तिमी म सँग मेरो घरमा जाने है !
घडीको सुइ धेरै घुमिसकेको थियो । घाम बिस्तारै-बिस्तारै अस्ताउँन थालेको थियो । म बहिनीलाई लिएर हतार-हतार घर गएँ । घर पुगेपछि मामुले मलाई गम्लङ् अंगालो मार्नु भयो । मैले सबै कुरा मामुलाई भनें । मैले खुत्रुकेमा जम्मा गरेको पैसाको धक्कु लगाएपछि बल्ल मामुले हाँस्दै मेरो कुरा टेर्नु भयो ।
अहिले बेलुकाको ठीक सात बजेको छ । बाबाको गाडी ढुइया आएर आँगनमा रोकियो । म बहिनीलाई लिएर हतार-हतार आँगनमा आइपुगें । बाबाले छक्क परेर बहिनीलाई हेर्नु भयो । उहाँले अलि रिसाउँदै भन्नुभयो- को हो छोरी यो नानू ? जसलाई पायो त्यसलाई घर ल्याउँनुहुन्न ।
म पनि के कम मैले पनि कडि्कदै भनें- बाबा, यो ड्राइभर अंकलको खुसी हो । तपाईंले पढ्न पैसा नदिए के, म उसलाई मेरो खुत्रुकेको पैसाले पढाउँछु ।
मैले यति भन्नासाथ ड्राइभर अंकल त गाडी पुस्नै छोडेर दौडेर आइपुगे । बहिनी दौडदै गएर अंकलको अंगालोमा बाँधिन पुगी । बाबाले एकछिन मलाई हेर्नु भयो र एकपल्ट हाँसिरहेका ड्राइभर अंकललाई । त्यसपछि उहाँले घरका सबैलाई आँगनमा डाक्दै भन्नुभयो- ल सुन घरका सबैजना आजबाट यो बच्चीलाई पढ्ने खर्च सबै मेरी छोरीले दिन्छिन् रे हा हा हा ।
बाबाले यसी जिस्काएको मलाई मन परेन । मैले आँखाभरि आँसु पार्दै आँखा रातो पादैं भनें- हो, म दिन्छु । बाबाले मलाई दिने दिनको पचास रुपियाँट बीस रुपिया यो बहिनीलाई दिन्छु । मेरो खुत्रुकेमा भएको सबै पैसा यसको भर्ना गर्न र ड्रेस किन्न दिन्छु ।
म यति भनेर घुक्क-घुक्क रुँदै मामुको अंगालोमा गएर रुन थालें ।
बाबाको मन न हो म रोएको देखेपछि के अडिन सक्थ्यो र । उहाँ त्यो खुसी बहिनी बोकेर मेरो छेउमा आउनु भयो । उहाँले मेरो छेउमा बहिनीलाई राखेर भन्नुभयो- ल ठीक छ छोरी, मलाई तिम्रो इच्छा शक्ति राम्रो लाग्यो । अब भोलिबाट दुबै छोरी एउटै स्कुलमा पढ्न जानू ।
बाबाले यति भनेपछि मैले ड्राइभर अंकललाई हेरें । उनी हाँसिरहेका थिए । तर उनको आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो । मामुले हामी दुबैलाई अंगालो खोलेर डाक्नुभयो । म र बहिनी दुबै मामुको अंगालोमा बाधियौं । आज मैले मेरो मामुलाई पनि निकै खुसी देखें, किनकि आज हाम्रो घरमा बाबाले भनेको होइन छोरीले भनेको कुरा सबैले मानेका थिए । मेरो मनको कुरा बुझ्ने मामु, बाबा, ड्राइभर अंकल, अन्टी र बहिनी सबै जनालाई धेरै-धेरै धन्यवाद । अब मेरी बहिनी मसँगै स्कुल जान पाउने भई । आहा, क्या मज्जा ।
साभार: भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, मासिक बालपत्रिका, वैशाख २०६६ बाट ।
ड्राइभर अंकल आज किन रोए ? Children's Story of Kar...
म कलेजमा हिरो थिएँ- Childhood days Memory of Write...
Professor Dr. Yoo Jeong Yi